Ka hor kulanka ugu horeeya
Sida ugu badan ee suurta gal ah isugu diyaari kulanka ugu horreeya ee aan yeelaneyno. Taasi waxay keeneysaa inaad kalsooni dareento, kulankeena ugu horreeyaana uu micno yeesho iyo in aad si dhakhsi ah u heshid waddadi aad shaqo ku heli lahayd. Halkan waxaad ka heleysaa talooyinka ku aaddan sida aad wax u qorsheyneysid kulanka ka hor.
Cv, shahaado, caddayn
Eeg oo dib u cusboonaysiin ku samee cv-gaaga Soo qaado shahaadooyinka, caddaynaha iyo dukumentiga kale ee caddaynaya waayo aragnimadaada. Soo qaado wixii caddayn dhakhtar ah ee loo baahan karo, tusaale ahaan haddii aad leedahay nooc ah hoos u dhac awooda laxaadka ah oo xadaynaya fursadahaaga inaad raadsato shaqo ama samayso hawlaha shaqo qaarkood.
Magdhabka laga helo qasnada shaqo la'aanta waa lacag aad heli karto marka aad bilaa shaqo tahay ee aad ka diiwaan-gashantahay xagayaga. Soo hubi haddii aad xubin ka tahay mid ka mid ah qasnadaha shaqo la'aanta. Haddii aad hayso su'aalo ku saabsan xubinnimadaada ama wax kale, la xiriir qasnadaada shaqo la'aanta.
Halkan waxaad ka akhrin kartaa nooca shuruudaha khuseeya iyo sida aad u codsanayso magdhabkan. Fadlan wax sii akhri ka hor kulankan, haddii aad hayso su'aalo – qor oo u soo qaado kulankan.
Bilow inaad qorshayso isla iminkaba
Ka fikir waxa aad doonaysid inaad ku shaqayso. Shaqooyin noocee ah ayaad ka fikiraysaa inaad si toos ah u raadiso? Miyaad u baahantahay inaad dhamaystirto waxbarashadaada ama waayo aragnimadaada? Ka fikir hadafyadaada, iyo sida jidka shaqo uu u eekaan karo. Qor fikradahaaga iyo talaabada ku xigta oo u soo qaado kulanka aad nala leedahay. Si fiican uga soo fikir oo qor su'aalaha aad noo hayso.
Miyaad doonaysaa inaad talaabada soo socota u qaado si toos ah? Waa kuwan saddex talo:
Raadi bandhig shaqaalaysiin oo kugu haboon
Gal Platsbanken oo eeg haddii aad hesho shaqooyin haboon oo la raadiyo
Bilow inaad raadiso shaqo – qaada tilmaamahayaga iyo talooyinkayaga
Fadlan sii eeg macluumaadki aad qortay markii aad is diiwaan-gelinaysay. Miyaad heshay wax kasta, amase ma laga yaabaa inaad ilowday wax waxbarasho ah, shaqo hore ama aqoon aad doonaysid inaad sheegto? Dhamaystir macluumaadkaaga ka hor kulanka aad nala leedahay, markaasi kulankeenu wuxuu yeelanayaa micno oo waxaanu si dhakhso ah kuu siin karnaa taageero sax ah.
Samayso baroofiil dhanka Mina sidor
Miyaad oggoshahay in shaqo bixiyayaashu ku helaan adiga? Samayso baroofiil dhanka Mina sidor, ha ku arkaan qiyaastii 5000 ee shaqo bixiye ee dad ku haboon shaqooyinkan ka raadiya dhankayaga bil kastaba oo ha lagugu aadiyo shaqo bixiyaha raadinaya isla aqoontaada.